Momba anay - Jiangyin Puyang Heavy Industry Co., Ltd.
Fampidirana ny vokatra avy amin'ny orinasa
Jiangyin Puyang Heavy Industry Co., Ltd. dia orinasa iray manam-pahaizana manokana amin'ny flange vy tsy misy fangarony, vy vita amin'ny firaka ary alimina aluminium any Chine, ny vokatra dia novokarina araka ireo fenitra ireo, toa ny JIS, DIN, ANSI, BS, GB, SH sns. Azontsika atao ihany koa ny mamokatra flange tsy manara-penitra arakaraka ny sary sy ny santionan'ny mpanjifa. Ny flanges aluminium vaovao dia miara-miasa amin'ireo orinasa lehibe ao an-trano sy ao anaty sambo toy ny State Grid, Henan Pinggao Electric Co., Ltd, Xi'an High Voltage Apparatus Co., Ltd, Shanghai Chint Electric Co., LTD, TOSHIBA, HYOSUNG, ABB Inc sy ny hafa.
Ny orinasanay dia niorina tamin'ny 2006, manana traikefa maro amin'ny indostrian'ny fanaovana hosoka izahay, ny vokatra isan-taona dia mihoatra ny 5000 taonina isan-taona. Nahazo koa ny fitaovana mandroso rehetra izahay, anisan'izany ny 4T, 1.75T, 1T, 0.75T Air Hammer, lafaoro fanafanana, lafaoro fitsaboana hafanana, milina fanodinana hafarana, milina fanovozana, milina fandavahana, milina fanasan-damba ary milina fanamarihana hatramin'ny mihoatra ny 60 .
Amin'izao fotoana izao, misy mpiasa 130 ao Puyang, ao anatin'izany ireo injeniera 9, hanao izay fara herinay izahay hanomezana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifanay.
Tao anatin'izay taona faramparany, Puyang dia nanondrana vokatra any amin'ny firenena maro, toa an'i Etazonia, Kanada, Espana, Brezila, Iran, Indonezia, Korea atsimo, Italia, France, Alemana, Singapore ary Australia, ny orinasa dia napetraka tamin'ny fikarohana sy ny fanavaozana ny fampandrosoana, ny fanodinana mekanika ary ny fonosana sy ny sisa amin'ny teknolojia famokarana, kalitaon'ny vokatra nahatratra ny fenitra anatiny sy iraisam-pirenena, ary nahazo mari-pahaizana ISO9001-2008 kalitao. Nahazo mari-pankasitrahana avy amin'ny orinasa ABS tamin'ny volana Jona 2012, ny volana jolay 2014, no nahazo ny mari-pahaizana DNV, orinasa GL.
Puyang amin'ny vidiny mirary, famokarana mahomby ary serivisy aorinan'ny varotra tsara ho adidy manokana, te-hiara-hiasa amin'ny mpanjifa mifototra amin'ny tombontsoa sy hikatsaka fivoarana iraisana, tongasoa ny mpividy manerantany Mifandraisa aminay.
★ Ny fisorohana, ny fitsaboana hafanana aorian'ny fisorohana ho fomba fiasa tena ilaina, ny fitsaboana ny hafanana aorian'ny fanaovana hosoka ary ny fizahana tsy mitongilana amin'ny fizotrana manokana.